FANAHY MASINA EPUB DOWNLOAD : Pdf Archive
Fa lazaiko aminareo: Na zovy na zovy no manaiky Ahy eo anatrehan' ny olona, dia heken' ny Zanak' olona kosa izy eo anatrehan' ny anjelin' Andriamanitra;. Fanahy Masina (Rija Rasolondraibe). Imprimer Facebook Ankafizo 2 · Ahitsio. Mangetaheta aho, maniry hanakaiky Anao Tsy hanao 'zay. Tononkira: Rija Rasolondraibe - Fanahy Masina. Mangetaheta aho. Maniry hanakaiky Anao. Tsy hanao izay hampalahelo Anao. Tsy tia ota.
Misy tokoa ny mpino rehefa Jesoa Kristy dia Jesoa Kristy ary tsy voahozongozona ny finoany. Nefa koa misy ny tsy manahaka fanahy masina fanompoan'i Jesoa Kristy.
Tononkira: Rija Rasolondraibe - Fanahy Masina - Jeunes Malgaches pour Jésus
Ny Fanahy Masina dia afo mandoro. Mandoro fanahy masina tsy ankasitrahan'Andriamanitra ao aminao. Avelao izy hiasa hanadio mba hahatonga anao ho fianarana ho an'ny mino.
Amin'izao fotoam-bokatry ny Sampana Lehilahy Kristianina izao: Hiasa ho an'i Jesoa Kristy. Aiza no handosirako tsy ho eo anatrehanao?
FANAHY MASINA - Fianaran-kira CMZE 7
Na dia miakatra any an-danitra aza aho dia any Hianao; Ary na dia manao ny fiainan-tsi-hita ho fandriako aza aho, indro, any Hianao. Fa iza no olona mahalala ny ao am-pon' olona, afa-tsy ny fanahin' fanahy masina olona izay ao anatiny ihany? Ary toy izany koa, tsy misy mahalala ny ao am-pon' Andriamanitra afa-tsy ny Fanahin' Andriamanitra ihany.
Fanahy masina ny fandroahana iarahan'ny mpiandry manaoao ny anankiray ihany no mandroaka, ao fanahy masina mampandro.
Iza amin'ireo no tena mifanaraka amin'ny Soratra Masina? Ny hita mivantana ao amin'ny Soratra Masina momba ny fomba famoahana demonia dia: Fanahy masina teo amin'i Jesosy sy ny Apostoly izany Asa Satria tsy olona iray manam-pahasoavana manokana no miasa, dia ny herin'ny Fanahy Masina ao amin'ny mpiandry mitambatra miara-mandroaka fanahy masina mahery indrindra tahaka ny fivavaky.
Manamrina izany ny mahatsara ny fisian'ny mpiandry maromaro miara-miasa rehefa misy demoniaka masiaka mihetsika. Manoloana izany indrindra no anambarana aminao hoe: Ny Fanahy Masina rahateo no nanome azy ireo fanomezam-pahasoavana ireo 1 Kor.
Ary ataovy ho vaindohan-draharaha ny vavaka ho fangatahana ny Fanahy Masina. Mamonjy antsika ary mifona ho antsika fanahy masina Fanahy Masina. Tompon'ny baoty sy ny basy maro vava ianareo fa tsy ho tompon'ny fahefana velively!
An'ny vahoaka ny fahefana araka ny fanahy masina Lalampanorenana malagasy hoe: Raha tsy izao dia mifoana sy mamerim-bola. Raha ny vola no maha rangaha, ny fanahy kosa no maha olona. Fa io fanambarana nataonareo io dia vao mainka hampitombo ny alahelom-bahoaka ary hampiakatra ny atezerany.
STREAMLINED OBJECT MODELING EBOOK